गगन थापाको प्रश्न : कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेर अन्य सञ्चालन गर्नुको आधार र तर्क के? – Health Post Nepal
गगन थापाको प्रश्न : कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेर अन्य सञ्चालन गर्नुको आधार र तर्क के?
२०७८ साउन २५ गते १२:३८
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेर अन्य परीक्षा सञ्चालन गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। थापाले कोरोना महामारीका कारण ‘कक्षा १२ को परीक्षा गरेर अन्य सञ्चालन गर्नुको आधार र तर्क के हो?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनले यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको धारणा मागेका छन्। ‘कोरोना महामारीको कारणले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित तर अन्य परीक्षा सञ्चालन! यसको आधार र तर्क के हो? यस विषयमा @mohpnep को धारणा के छ?’, थापाले भनेका छन्।
थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वास्थ्यका सम्मूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्न वा वैकल्पिक माध्यामबाट गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘@PM_nepal कि स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वास सरकारले दिलाउनु पर्यो कि वैकल्पिक माध्यामबाट परीक्षा संचालन गर्नुपर्यो।’, थापाले भनेका छन्।